Sida loo kordhiyo cabirka farta ee Webka WhatsApp | Androidsis
Sida loo kordhiyo cabbirka farta ee Webka WhatsApp
Kordhi cabirka farta ee Webka WhatsApp ama si toos ah arjiga Android, waa mid ka mid ah xalka ugu dhaqsaha badan dadkaas bilaabaya inay yeeshaan dhibaatooyin xagga indhaha ah oo daallan, waqti badan ku qaata kumbuyuutarka hortiisa ama si fudud u doonaya inay arkaan waxyaabaha ay ka kooban tahay iyadoon loo dhowaan shaashadda.
Ficil ahaan imaatinkiisa suuqa, WhatsApp wuxuu noqday barnaamijka fariimaha loo isticmaalo adduunka oo dhanWaad ku mahadsan tahay in bilawgiiba gebi ahaanba bilaash ahayd (marka laga reebo xilli iOS ka oo ay ku baxday 0,99 euro)
Tan, waa inaan ku darno in labadii sano ee la soo dhaafay, ay sidoo kale noqotay a qalab isgaarsiineed oo aad u fiican shirkadaha, Furitaanka fursado ganacsi oo cusub shirkadaha yar yar, in kastoo xilligan la joogo, wali ma helin dhammaan xisbigii uu Facebook doonayay.
In kasta oo ay run tahay in Telegram uu yahay mid aad u raaxo iyo weji badan, maaddaama ay u shaqeyso si ka madax bannaan taleefannada casriga ah, in kasta oo ay in ka badan 500 milyan oo isticmaaleyaashu dunida oo dhan leeyihiin, WhatsApp oo ay adeegsadaan in ka badan 2.000 milyan oo qof Hantidu waa boqorka farriinta.
Haddii aadan haysan WhatsApp, waxay la mid tahay inaadan haysan taleefan casri ah iyo Kumaa aan haysan taleefan casriga ah maanta? In si ballaadhan loo adeegsado shirkado badan, shirkaddu way sii ballaadhnayd tirada howlaha lagu bixiyo WhatsApp Web, habka kaliya ee barnaamijkani noo siinayo si aan awood ugu yeelano inaan macaamiisha ula xariirno si raaxo leh kombiyuutar oo aan ugala hadlin casriga.
Sidan oo kale, ma awoodno oo keliya beddel farta qoraalka si markaa ay ugu raaxeysato uguna dhaqso badan tahay in la raaco wadahadalka, laakiin marka lagu daro, waxaan sidoo kale ku dari karnaa geesinimo, faallooyin, garaacista qoraalka ... Shaqooyinkan laguma heli karo oo keliya qaabka bogga, laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa barnaamijka Android. .
1 Sida loo beddelo cabbirka xarfaha ee Webka WhatsApp
2 Sida loo beddelo cabbirka xarfaha ee WhatsApp Desktop
3 Sida loo beddelo cabbirka font ee WhatsApp ee ku jira Android
4 Sida loogu isticmaalo geesinimada WhatsApp
5 Sida loo adeegsado farta qoraalka ee WhatsApp
6 Sida looga gudbo qoraalka qoraalka ah ee WhatsApp
7 Sida loo adeegsado iskudhafka WhatsApp
8 Gawaarida kumbuyuutarka ee WhatsApp
9 Sida loo beddelo qaabka font ee WhatsApp
10 Sida loo hawlgeliyo habka mugdiga ah ee Webka WhatsApp
11 Sida loo damiyo ogeysiisyada desktop
Sida loo beddelo cabbirka xarfaha ee Webka WhatsApp
Runtii, Shabakadda WhatsApp nooma siinayo wax hawlo hooyo ah Kala xulashada qaabeynta ee noo oggolaaneysa inaan ballaarinno ama yareynno cabbirka font, si kastaba ha noqotee, waxaa jira xeelad yar oo lagu sameyn karo.
Xeeladani waxay ka kooban tahay ku dhaji tabta WhatsApp Web, si dhammaan waxyaabaha la soo bandhigo ay u weynaadaan oo loo fududeeyo akhrintooda. In sidaa la yeelo, waa inaan furnaa WhatsApp Web, oo riixnaa iskudhafka furaha Xakamaynta iyo calaamadda + inta jeer ee loo baahdo.
Haddii aan rabno inaan yareyno cabbirka, waa inaan riixnaa iskudhafka furaha Xakamaynta iyo calaamadda - Inta jeer ee loo baahdo. Kordhinta ama yaraynta aragtida barta Websaydhka WhatsApp saamayn kuma yeelanayso inta kale ee tabsyada, sidaa darteed uma baahnid inaan ka walwalsano inaan ka tagno dhaweyd sidii ay ahayd ka hor intaan wax laga beddelin.
Sida loo beddelo cabbirka xarfaha ee WhatsApp Desktop
In kasta oo aysan dad badani isticmaalin, WhatsApp waxay siisaa dhammaan dadka isticmaala Windows a barnaamijka iyada oo loo marayo Dukaanka Microsoft, Desktop WhatsApp, taas oo u oggolaanaysa marin u helka arjiga farriinta si la mid ah habka loo maro biraawsarka.
Haddii aad isticmaale u tahay codsigan, waad awoodaa isticmaal xeelad isku mid ahSi kastaba ha noqotee, waxaa jira xaddiga cabbirka ugu badan marka la ballaadhinayo warqadda, markaa haddii aysan kugu filnayn, waa inaad doorataa inaad adeegsato nooca websaydhka ah ee WhatsApp halkaas oo ficil ahaan aan xad lahayn.
Sida loo beddelo cabbirka font ee WhatsApp ee ku jira Android
Nooca WhatsApp ee loogu talagalay Android, si ka duwan nooca shabakadda, haa taasi wuxuu noo ogolaanayaa inaan weyno cabirka font, si aysan isticmaaleyaashu wax dhibaato ah u helin markay akhristaan ​​sheekooyinka.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa helitaanka dejinta ee dalabka.
Gudaha u ahkaftanka, waxaan marin u helnaa xulashooyinka helitaanka.
Gudahamarin u helid, dhagsii Cabbirka foornada.
Fursadaha cabirka farta ee aan ku helno xulashadan waa: Hore loo sii cayimay, Grande o Aad u weyn.
Sida loogu isticmaalo geesinimada WhatsApp
Si loo qoro qoraal si geesinimo leh, waa inaan ku darnaa xiddig bilowga iyo dhamaadka ereyga ama qoraalka. Hadaan qorno * Androidsis * adigoo riixaya furaha dirista ayaa soo bandhigi doona qoraalka Androdsis si geesinimo leh.
Haddii aan qorno * Androidsis cool * way tusi doontaa Androidsis waa qabow geesi
Si aad ugu qorto WhatsApp si aalad ah qalabka Android, waa inaan la soco riix dheer qoraalka aad galeyso sanduuqa qoraalka iyo dooro More - Geesi
Sida loo adeegsado farta qoraalka ee WhatsApp
Si aan u italisiinno qoraalka, waa inaan ku darnaa xiddig bilowga iyo dhammaadka ereyga ama qoraalka. Hadaan qorno AndDayaanna _ adigoo riixaya furaha dirista ayaa soo bandhigi doona qoraalka Androdsis salka.
Haddii aan qorno _Androidsis cool_ way tusi doontaa Androidsis waa qabow salka.
Si aad ugu qorto farta ku qoran WhatsApp ee aaladda Android, waa inaan la soco riix dheer qoraalka aad galeyso sanduuqa qoraalka iyo dooro More - Italic.
Sida looga gudbo qoraalka qoraalka ah ee WhatsApp
Si qoraal loogu qoro xaafadda, waa inaan ku darnaa xiddig bilowga iyo dhammaadka erayga ama qoraalka. Hadaan qorno ~ Androidsis ~ adigoo riixaya furaha dirista ayaa soo bandhigi doona qoraalka Androdsis ku yaal xaafadda.
Haddii aan qorno ~ Androidsis qabow ~ way tusi doontaa Androidsis waa qabow ku yaal xaafadda.
Si aad ugu qorto farta ku qoran WhatsApp ee aaladda Android, waa inaan la soco riix dheer qoraalka aad gasheyso sanduuqa qoraalka oo xulo Inbadan - Ka gudub
Sida loo adeegsado iskudhafka WhatsApp
Si aad ugu qorto qoraal meel keli ah, waa inaan ku darnaa xiddig bilowga iyo dhamaadka ereyga ama qoraalka. Hadaan qorno «'Androidsis«'Adiga oo riixaya furaha dirista ayaa soo bandhigi doona qoraalka Androdsis oo kujira meegaarista.
Haddii aan qorno «'Androidsis mola«', Androidsis mola ayaa lagu soo bandhigi doonaa oo keliya.
Si aad ugu qorto jaangooyada WhatsApp ee aaladda Android, waa inaan la soco riix dheer qoraalka aad gasheyso sanduuqa qoraalka oo xulo Inbadan - Iskuday
Gawaarida kumbuyuutarka ee WhatsApp
Tabaha kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka, marka aad ula qabsato iyaga, iyoma noolaan kartid adigoon isticmaalin, Maaddaama ay noo oggolaanayaan inaan kordhinno wax soo saarkeenna iyadoo aan loo baahnayn inaan si joogto ah ugu tiirsanaano jiirka si aan u qabanno howlo aan qaban karno innagoo aan gacmaha ka saareynin kumbuyuutarka.
In kasta oo ay u muuqan karto wax lala yaabo, iyada oo la tixgelinayo WhatsApp, sida dhammaan codsiyada ka soo baxa Facebook, waxaa ka mid ah taxane taxane ah oo kumbuyuutar oo loo rogo nooca webka, toobiyeyaal aan ku abuuri karno wada sheekeysi cusub, calaamadeynno farriimaha sida akhriska, u sameyno baaritaanno ...
Halkan waxaan ku tusaynaa dhammaan Tilmaamaha kumbuyuutarka ee laga helo WhatsApp Web:
Ku calaamadee farriin sida loo akhriyey Ctrl + Alt + Shift + U
Diidmada wada hadalka Ctrl + Alt + Shift + M
Kaydso sheeko Ctrl + Alt + E
Tirtir sheeko Ctrl + Alt + Spacebar
Samee sheeko Ctrl + Alt + Shift + P
Ka raadi barnaamijka Ctrl + Alt + /
Ka raadi sheeko Ctrl + Alt + Shift + F
Wadahadal cusub Ctrl + Alt + N
Kooxda cusub Ctrl + Alt + Shift + N
Macluumaadka iyo macluumaadka Ctrl + Alt + P
Fursadaha qaabeynta Ctrl + Alt +
Sida loo beddelo qaabka font ee WhatsApp
Sheegasho aad u fiican si aan u helno dareenka macaamiisheenna, haddii aan u isticmaalno Ganacsiga WhatsApp ganacsigeennu waa isticmaal noocyo kala duwan iyadoo kuxiran nooca macluumaadka aan u dirno macaamiisheenna, si marka aad jalleecdo, aad u hesho macluumaadka aadka kuu xiiseeya.
Intii aan ku jirnay Android waxaan isticmaali karnaa noocyo kala duwan oo loo maro codsi sida Fancy Text Generator, nooca desktop-ka, nasiib darro ma isticmaali karno ilo kale oo dheeri ah, sidaa darteed haddii aan haysanno fikradda ah inaan sameyno, waan iska illoobi karnaa.
Aaladda dhaliyaha qoraalka & astaamaha
Developer: sTech cusub
Ikhtiyaarka kaliya wuxuu noqon karaa in la koobiyeysto oo la dhajiyo qoraallada aan dooneyno inaan si joogto ah ugu isticmaalno ilo kale, feyl qoraal ah markasta iyaga gacanta ku hay sida il ahaan.
Hadaan rabno u isticmaal Kaomoji fariimaheena adigoo adeegsanaya WhatsApp Web, waxaan ku sameyn karnaa barnaamijka asalka ah ee laga heli karo Windows iyada oo loo marayo kumbuyuutarka kumbuyuutarka Windows +. (muddada). Codsigan yar ayaa noo oggolaanaya inaan ku darno tiro badan oo kaomoji ama calaamado ah, marka lagu daro emojis, in kasta oo ay tan u badan tahay WhatsApp.
Sida loo hawlgeliyo habka mugdiga ah ee Webka WhatsApp
Habka mugdiga ah, oo muddo dheer qaatay si loo gaaro nooca qalabka moobiilka, sidoo kale waxaa laga heli karaa WhatsApp Web iyo WhatsApp Desktop labadaba. Shaqadan, ku beddel midabka iftiinka asalka dalabka midab madow oo madow, kuna badalaya midabka madow ee xarfaha mid cawlan.
Sidan oo kale, mahadsanid qaabka mugdiga ah, waxaan u isticmaali karnaa WhatsApp Web iyada oo aan indhaheennu ka xanuunsanayn intii loo baahnaa marka laydhka ku xeerani hooseeyo. WhatsApp waxay na siineysaa 3 ikhtiyaar markii aan isku hagaajineyno mawduuca aan dooneyno inaan adeegsanno:
Haddii aan rabno mawduuca nooca websaydhka ah ee WhatsApp waxaa wax laga beddelaa isla waqtigaas sida qalabka moobiilkeena, waa inaan ku xulanaa Default nidaamka. Haddii aan dooneyno inay marwalba noqoto Iftiin ama Mugdi, waa inaan ku xulannaa xulashooyinka qaabeynta qaabeynta Webka WhatsApp.
Sida loo damiyo ogeysiisyada desktop
Waxaa laga yaabaa, in ka badan hal munaasabad, inaad dooneysay inaad si ku meelgaar ah u joojiso ogeysiisyada Shabakadda WhatsApp ee kombiyuutarkaaga si aad u nasato, u sameyso waxyaabo kale oo u baahan fiiro gaar ah ... Xakamaynta taleefanka casriga ahi xal maaha, maxaa yeelay inkasta oo taleefannadeenna casriga ahi aysan soo garaacin, nooca webka ayaa dhacaya.
Si loo joojiyo ogeysiisyada desktop-ka ee WhatsApp Web, waxaan marin u helnaa xulashooyinka Qalabaynta, dhagsii Ogeysiisyada oo waxaan calaamadeyneynaa sanduuqa Jooji dhammaan ogeysiisyada desktop-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo kordhiyo cabbirka farta ee Webka WhatsApp
samee 1 toddobaad
Tan iyo markii faaf reebku bilaabmay waxaan isticmaalaa Telegram iyo Signal, kuma soo raacayaan adiga (Signal xitaa wuu ka amaan iyo qarsoodi badan yahay Telegram). Waxaan kaliya u isticmaalaa WhatsApp jawiga qoyska iyo wax yar oo ku habboon.
Sida loo soo dejisto loona ciyaaro Mario Kart Tour on PC
Sida loo arko astaan ​​gaar ah barta Instagram